Uma ubheka izibalo yokuthengisa, singasho kugcwale umlomo ukuthi "Hyundai Sonata" eMoscow ithandwa kakhulu imoto yakwelinye izwe ekilasini yayo. Futhi lo mkhuba is baphawula hhayi kuphela e-dolobha, kodwa futhi ngalé kwemingcele yayo. Futhi manje esikhathini esingaphezudlwana kweminyaka 2 edlule ku eziphethe imakethe yomhlaba wonke beza entsha, isizukulwane wesithupha edume ibhizinisi ekilasini izimoto. Manje olusha "Sonata", ngaphezu kwezinye design and design ingaphakathi, lithole amaphepha kancane console YF. Kulo nyaka, igugu usebhekene ngisho restyling encane. Kodwa nomthelela kangakanani esihle kangaka i update on imoto ethandwa eRussia?
Kanjani ukuze siqinisekise izimpendulo somshayeli, "Hyundai Sonata 6" anezinhlaka fashion Amathrendi zamuva. "Izindonga zayo is fully ngokuvumelana izimfashini zamuva emhlabeni jikelele." "Ubusha Front lithole enye indlela ye-grille." "Ngenxa trapezoid yabo design emisha isibe liyabonakala okwengeziwe imigwaqo Russian!" Ngakho umsindo umshayeli impendulo. "Hyundai Sonata" kule ayilokothi iyeke mangaza amakhasimende ayo. Entsha ifomu angumfelandawonye main ugongolo izibani kwenza imoto eyingqayizivele ngaphezulu, kodwa ngesikhathi esifanayo, ngalé yayo namanje liyabonakala. By endleleni, le nhlanganisela main-ugongolo headlamps kuthandwa kakhulu phakathi automakers emhlabeni, futhi isetshenziswa cishe zonke isigaba imoto ibhizinisi. umugqa umzimba ohlangothini nezingxenye ezingemuva akukashintshi, futhi Ubukhulu bayo abelokhu njengoba yayinjalo.
Interior. Incazelo Nezibuyekezo
"Hyundai Sonata" siguqule kakhulu ngaphakathi. Isici esiyinhloko, futhi ngokunembile, evelele elingaphakathi isibe umdlalo kokuqhathanisa. Ngalokhu kusho yokwamukela inhlanganisela ezinhle ezahlukene ngokuphelele ithoni kuphela. Top headlining ukukhanya, ukukhanya ngokushelela ku ngaphambili panel. Ngezansi, kunalokho, bawo nezinto ezasetshenziswa amathoni amnyama. Lokhu experiment kwenzakala yaphumelela, futhi manje design ingaphakathi ingaphezu yasekuqaleni. By endleleni, njengoba kwaphawula u-izimpendulo somshayeli, "Hyundai Sonata" akuyona ngokucindezela phezu amehlo akho shintsho abukhali kusukela omnyama nomhlophe namaphakathi nezwe. Ngokungafani izizukulwane ezidlule, entsha iye igcwele izihlalo okuningi ergonomic futhi ukhululekile, futhi lokhu awasebenzi kuphela ngaphambili irowu. Isikhala abagibeli ezingemuva ezingaphezu kuka umlenze ngokwanele, ukuze umqondo gumbi eduze esebenza isizukulwane lesithupha 'Sonata'.
Ngo emakethe yethu lezipho ezintsha izotholakala ezahlukeneyo ezimbili injini. Phakathi kwazo eyisisekelo ezimbili-litre esebenzisa u-petrol iyunithi nomthamo 150 amahhashi. Lesiphakeme, 2.4-litre engine lunamandla ka 178 amahhashi. Ehlanganisiwe motors omoya ezimbili ongakhetha kuzo. Lokhu kungaba ukudluliswa manual, automatic transmission kanye nenani elilinganako izigaba (ka 6). Akunakwenzeka ukuthi, futhi petrol. New isizukulwane sedan ibusa emhlabeni 8-9 amalitha amafutha "amakhulukhulu" emjikelezweni kuhlanganiswe. Banikezwe ukusebenza ivolumu uMbhalo, kuba izinga eyamukelekayo ngempela.
"Hyundai Sonata": Intengo
2013 kudambisa izimoto kuwufanele kusukela ayizinkulungwane 999 ruble 1 million 165 ayizinkulungwane.
Indlela ukukhulisa ingcindezi ekhaya? Amacebo eziwusizo
Usofa ongaphambili omise emaqaqasini efulethini yakho